Steam - GNU / Linux အတွက်အသိုင်းအဝိုင်း၊ စတိုးဆိုင်နှင့်ဂိမ်းလိုင်း Linux မှ
Steam - GNU / Linux အတွက်အသိုင်းအဝိုင်း၊ စတိုးဆိုင်နှင့်ဂိမ်းလိုင်း
ဥပမာ GNU / Linux အတွက်ဗီဒီယိုဂိမ်း application များကိုဖြတ်သန်းပြီးနောက် GameHub, ချစ်သူ y Lutrisအကောင်းဆုံးသော၊ အသုံးပြုပြီးနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောနောက်ဆုံးပေါ်သတင်းအချက်အလက်များကိုမှတ်ချက်ပေးခြင်းကိုမရပ်တန့်ရန်ယုတ္တိရှိသည် ပလက်ဖောင်း (ရပ်ရွာ / ဆိုင် / ဝယ်သူ) အတွက် GNU / Linux ပေါ်မှာဂိမ်းများ, IE, ရနှေးငှေ့.
ဟုတ်တယ် ရနှေးငှေ့ လူအများစုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် ဒီဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းဖြန့်ဖြူးပလက်ဖောင်း။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ဂိမ်းများအတွက်ဂိမ်းများနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲထုတ်လုပ်သည့်ကမ္ဘာကျော်ကုမ္ပဏီ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည် အခင်အရှင်.
ကြောင်းထောက်ခံမှုမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ရနှေးငှေ့ ဒီနေရာမှာသူတို့ရဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည် အသုံးပြုသူများ (အဖွဲ့ဝင်များ / သုံးစွဲသူများ) နိုင် ဂိမ်းအမြောက်အမြားကိုဝယ်ယူပြီးဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါကွဲပြားခြားနားသောထုတ်လုပ်သူများ (software developer များ) မှသင့်အတွက်ရနိုင်သည် ကြီးမားပြီးကြီးထွားလာ catalog။ ထို့အပြင်အခြားဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များကိုခံစားနိုင်ရန်။
1.1 Steam ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ
1.2 GNU / Linux တွင် Steam ကိုမည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း။
နားလည်ပါနှင့်အသုံးပြုပါ ရနှေးငှေ့ တော်တော်လွယ်ပါတယ် အခမဲ့သို့မဟုတ်ပွင့်လင်းသောအခမဲ့ဂိမ်းများကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်၊ မည်သည့်အကန့်အသတ်ဖြင့်မျှမပါဘဲကမ်းလှမ်းနိုင်သည်၊ အခြေခံအားဖြင့်၊ သင်ကဂိမ်းတစ်ခုဝယ်သောအခါသင်ဝယ်ယူသောအရာသည်၎င်းအတွက်စာရင်းသွင်းခြင်းဖြစ်သည်၊ စာရင်းသွင်းခြင်း (ကိုယ်ပိုင်နှင့်လွှဲပြောင်းခြင်းမဟုတ်ပါ) သင်၏ account login မှတစ်ဆင့်ရယူနိုင်သည်။
မည်သည့်ဂိမ်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ္တူကိုမဆို Steam ဘယ်တော့မှမပေးပါဘူး။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးသည့်နောက်၎င်းရုပ်ဝတ္ထုဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုပေါ်တွင်၎င်းကိုကူးယူရန်ခွင့်ပြုသော်လည်း၊ ၎င်းကိုသူတို့လိုအပ်သည်ဟုအကြိမ်ပေါင်းများစွာဒေါင်းလုပ်ချခြင်း၊ ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းကိုခွင့်ပြုရန်နှင့်သုံးစွဲသူအကောင့်နှင့်အမြဲတမ်းချည်နှောင်ထားသည့်ဂိမ်းနှင့်၎င်းတို့လိုအပ်သောကွန်ပျူတာများတွင်မည်သည့်ကန့်သတ်ချက်မှမရှိဘဲကွန်ပျူတာတစ်ခုမှကွန်ပျူတာမှစတင်ရန်မှအပ သင်၏အကောင့်အလယ်တွင်အချိန်ဖြစ်သည်။
သင့်မှတစ်ဆင့်ရေနွေးငွေ့ရရှိနိုင်သည် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်, အရာများစွာကိုအကြား, ဘယ်မှာaည့်သည်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရန်မှတ်ပုံတင်ရန်နိုင်ပါတယ် အသိုင်းအဝိုင်း, သွားရောက်ကြည့်ရှု ကုန်ဆိုင် ဂိမ်းများကိုဝယ်ယူရန်နှင့် (သို့) ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်နှင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် ဂိမ်း clientသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအဘို့ operating system သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။
GNU / Linux တွင် Steam ကိုမည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း။
လက်ရှိတွင် Steam ဂိမ်းဖောက်သည် မှာရနိုင်သည် .deb format၊ ထဲမှာ 1.0.0.61 ဗားရှင်း။ ၎င်းကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ မထည့်သွင်းမီ သဟဇာတ Operating System ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပမာအမှု၌, က MX Linux 19.1, DEBIAN 10.3 ကိုအခြေခံပြီးဖြန့်ဖြူးခြင်းပထမ ဦး ဆုံး web platform ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်အကြံပြုလိုသည်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတော်လေးရိုးရှင်းပြီးအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်:
တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖွင့်ပါ အသုံးပြုသူအကောင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ် login သည်။
ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးထည့်သွင်းပါ အဆိုပါ Steam အားကစားပြိုင်ပွဲ client ကိုမှ။
အဆိုပါ Steam ဂိမ်းလိုင်း၏ကန ဦး ပစ်လွှတ် သင့်ရဲ့ update ကိုနှင့်နောက်ဆုံး configuration များအတွက်။
စတိုး၏အသုံးပြုမှု ရရှိနိုင်ဂိမ်းများကို install နှင့်အပြေးသည်။
သင်မြင်သည်အတိုင်း, နှစ် ဦး စလုံးအတွက်အတွက်မှတ်ပုံတင် ရေနွေးငွေ့ပလက်ဖောင်းကြိုက်တယ် download လုပ်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်း အချို့၏ အခမဲ့ဂိမ်းများ (အခမဲ့ကစားရန်) (သို့) ပေးဆောင်ရသော (စီးပွားဖြစ်) ၎င်းသည်လုံးဝမခဲယဉ်းပါ။ အခြေခံအားဖြင့်အရာအားလုံးအသုံးပြုသောကွန်ပျူတာ၏ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်၎င်း၏လိုက်ဖက်မှုပေါ်တွင်မူတည်လိမ့်မည် GNU / Linux Distro ထောက်ပံ့ရန် ရနှေးငှေ့ နှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်များနှင့်အသုံးပြုခံရဖို့ဂိမ်းများ၏လိုအပ်ချက်များကို။
တစ်ခုခုနဲ့အတူအနားယူပါ ရနှေးငှေ့, GameHub, ချစ်သူ y Lutrisသို့မဟုတ် retro console emulators (သို့) desktop ဂိမ်းများကဲ့သို့သောဗီဒီယိုဂိမ်းများအတွက်အခြား application မ်ားကိုယခုဖော်ပြသည် GNU / Linux များ အရမ်းကောင်းတယ် ဂိမ်းကစားခြင်းစနစ် ၏ရန်အလွန်နီးကပ်တဲ့အဆင့်နှင့်အတူ Windows နဲ့ MacOS.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Steam» အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နှင့်ဒဏ္.ာရီ ဂိမ်းကစားသူများအတွက်ပလက်ဖောင်း ဒါကြောင့်တစ် ဦး ကတည်းကအားလုံးတ ဦး တည်း၌တည်၏ Multiplatform ဂိမ်းအသိုင်းအဝိုင်း၊ စတိုးနှင့်လိုင်းအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့၊ ကြီးထွားလာနေတဲ့ကက်တလောက် «Juegos compatibles» ငါတို့အဘို့ အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်း Operating Systemsတစ်ခုလုံးအတွက်, အလွန်အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Steam - GNU / Linux အတွက်အသိုင်းအဝိုင်း၊ စတိုးဆိုင်နှင့်ဂိမ်းလိုင်း
အကယ်၍ သင်သည် Steam မှတစ်ဆင့်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ ၀ ယ်လျှင်သင်က၎င်းမှတစ်ဆင့် ၀ င်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Linux တွင်ရှိလျှင်၎င်းသည် Proton ကိုသုံးရန်အလွန်ဖြစ်နိုင်သည်။
Proton ကိုသက်ဝင်စေဖို့ option နဲ့အတူပါရှိပါတယ်
Manjaro Linux 19.0“ Kyria” ကို Linux 5.4, Xfce 4.14, KDE 5.17, Gnome 3.34 နှင့်ထို့ထက်ပိုသည်။